Inona no vehivavy Shinoa mitady ao ny vadiny. Video Mampiaraka
Ny teny teti-bola vadiny avy amin’ny teny teti-bola ny trano fonenana, ny governemanta famatsiana ny trano fonenana-bahoaka noho ny ambany-vola miditra isan-tokantrano. Araka ny anarany dia midika, teti-bola vadiny ara-toekarena ny hery ny lalana fa ny diamondra lehilahy manan-tsaina, manam-pahaizana, manan-karena ary tsara-mahalala fomba ny olona avy kaja fianakaviana. Na izany aza, ny teti-bola vadiny, araka ny Baidu, iray amin’ireo tena toetra mampiavaka ny teti-bola vadiny izy ho ara-dalàna. Tsy ratsy fa tsy tsara tarehy loatra na mahantra izy na manan-karena. Raha ny tena izy: tsy alehany. Teti-bola ny lehilahy dia azo antoka, na ara-bola sy ara-pihetseham-po. Izy ireo dia loyally hijanona ao an-trano sy mikarakara ny trano izy ireo dia tsy hivoaka any am-ponja na ny fanitsakitsaham-bady raharaha. Ny s tena sarotra ny miteny hoe, satria maro ny vehivavy Shinoa avy any amin’ny hafa valiny tao an-tsainy. Ny fijeriny momba izay ny tsara ny vadiny dia toy ny mety miovaova araka ny vokatry ny tontolo iainana izy ireo hitombo ao, ny fanabeazana izy ireo mandray, ary ny fitarihana ny ray aman-dreny sns. I ll fotsiny tonga amin’ny ny famaranana voalohany: tsy misy fitsipika valiny. Raha te-hahalala inona ny tovovavy iray mitady, tonga ianao mahalala izay karazana olona izy, eo amin’ny toerana voalohany. Back to ny oniversite taona, iray ny mpiray efitra hung avy amin’ny hafa ry zalahy tsy tapaka mba hahita ny tsara indrindra safidy. Mahaliana tokoa, satria manan-karena dia teo an-tampon’ny ny lisitra. Indray andro nilaza tamiko izy fa izy dia mampiaraka roa ry zalahy tamin’izany andro izany(ny fiarahana kokoa noho ny olona iray dia tsy ny Sinoa, ny zavatra azo antoka) mangingina aza(tsy t hilaza na ny azy ireo, fa izy mampiaraka ny olona iray). Nantsoiko ry neny ny andro hafa, sy nilaza taminy ny momba izany, hoy izy. Hay izy, naniry azy ny reniny mba manoro hevitra azy izay lehilahy nahazo hery anaty misimisy kokoa mba hahazoana vola bebe kokoa amin’ny ho avy. Mazava ho azy fa, ny fitadiavana vola milina hanambady toa tena tsara ho azy reny, koa. Raha ny marina vitsivitsy mpandala ny nentin-drazana(tery saina)ray aman-dreny Shinoa te-ny ankizy-kevitra ny hanambady olona iray amin’ny tsara karama asa, na dia fiara na trano, na inona na inona izay s azo tsapain-tanana sy mazava. Ray aman-dreny sasany toy izany dia zara raha mandinika na ny s mendrika ny ela ny ela. Noho izany, ny mety ho, ny ankizy na ny mahazo resy lahatra, na handeha ho sarotra ny ady manohitra ny ray aman-dreniny lol(izaho angamba isan ny farany karazana, fa soa ihany fa ny fianakaviana dia t fa tery saina mba hanatsorana ny fanambadiana toy izany). Fa ny ohatra dia tsy ny rehetra any Shina. Misy be dia be ny Shinoa ankizivavy manodidina ahy, mitazona somary samy hafa sy ny fomba hendry kokoa view. Ry zareo tsy miankina sy matoky tena tsy ampy mba miantehitra amin’ny lehilahy mba hitondra azy ireo ny fahasambarana, ary ny mahay dia ampy ny fitantanam-bola ny fiainana(na ny mpiray efitra tamiko aho dia niresaka momba ny dia toy muddling amin’ny alalan’ny rehetra miaraka amin’ny tsy mieritreritra ny hanangana ny ho avy tsaratsara kokoa ho an’ny tenany amin’ny alalan’ny fanaovana ny tena ezaka). Izy ireo dia mitady ny tsara fanahy, malala-tsaina, tia sy be herim-po karazana sns.
Amin’izay heviny izay, izy ireo dia tahaka ny maro hafa ny zazavavy any amin’ny faritra hafa eto amin’izao tontolo izao. Raha toa ianao vahiny iray izay manana ny mahagaga Shinoa zazavavy avy any amin’ny fiainana, ary ianao ve efa nieritreritra ny handeha lavidavitra kokoa amin’ny fifandraisana izany(raha toa ka tsy misy na inona na inona), anontanio azy izay izy no mitady ao amin’ny tsara vadiny. Hafa noho ny fametrahana, ianao koa mahazo tena be dia be ny chance-hahafantatra bebe kokoa ny momba azy, ary manantena ny sasany mahazo hevitra toy izay karazana, izy dia mitady. Tsy azoko antoka na ianao efa mahafantatra ity. Na dia izany aza, mbola te-hiteny hoe: aza t hitsambikina amin’ny famaranana izay manokana valiny(ny iray dia mety tsy mitovy)afaka maneho ny hafa rehetra valiny atao amin’ny Sinoa ny ankizivavy. Izaho ve dia nino hatrany fa ny olona rehetra eto amin’ity izao tontolo izao ity dia tsy manam-paharoa, ary ireo rehetra nahazo toa dikan-samy hafa ny zavatra tsara indrindra ny zazavavy, lehilahy ho azy ireo dia toy ny. Izy dia tokony ho mahantra, ka fantany izy ka t hanambady noho ny vola, fa izy mila manana tsara ny ho avy.
Dia mila, fara fahakeliny
Izy dia tokony handeha ho any amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena fotoana isan-kerinandro satria ho vadiny rahatrizay dia ho tanora noho izy. Raha toa izy ka sola, dia ilaina ny manana volo transplants.
Izy ireo dia cheap ao Shina
Mila te-hiaina ao Shina. Amin’izay fomba izay dia mahazo ny ankizivavy izay tsy t maniry ny hahazo pasipaoro vaovao. Izy dia tokony mitondra fiara Buick mba hampiseho ny fomba tsy manam-paharoa izy. Izy dia tokony ho multi-manan-talenta izany. Raha toa izy ka tsy afaka mitendry zava-maneno izy, dia tokony ho afaka mihira tsara. Ny shinoa no tena tia mihira. Dia ilaina mba tsy manana na inona na inona namabo ny ankizy satria vehivavy Shinoa mankahala ny lehilahy izay mandany ny fisotrony vilany feno vola ny ankizy izay tsy t mankasitraka azy io, ary aza t manadino, avy any ambony, aminareo ny mahantra. Mila setroka be dia be ny vilany satria miaina ao Shina, ianao dia handeha ho any mila izany mba hanorim-ponenana ao amin’ny kolontsaina vaovao
Fomba Hahazoana ny Bandy Mahita Anao tao amin'ny Club - China Mampiaraka ny Lahatsary amin'ny Chat →